Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka lagu baadigoobayo maleeshiyadii Saraakiisha leysay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka lagu baadigoobayo maleeshiyadii Saraakiisha leysay
Wararkii ugu dambeeyay hawlgalka lagu baadigoobayo maleeshiyadii Saraakiisha leysay
Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya Kumaandooska Danab iyo Nabad Suggida Galmudug ayaa weli ku hawlan baadigoobka loogu jiro maleeshiyaad la sheegay in maalin ka hor ay Gobolka Galgaduud ku dishay Saraakiil ka tirsanaa Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa xaqiijiyay in weli uu hawlgalku socdo, isagoo intaa ku daray in maleeshiyadaasi laga baadigoobayo dhul illaa 150km ka baxsan halka uu weerarku ka dhacay.
Wasiirka ayaa goor sii horeysay sheegay in gacanta lagu soo dhigay hal nin, oo si dhow loola xiriirinayo maleeshiyadii dilka gaysatay.
Goor dhow oo caawa ah waxaa soo baxay warar sheegaya in Ciidamada Dowladda ay gacanta ku soo dhigeen afar nin oo kale, kuwaa oo midkood la sheegay in uu dhaawac yahay.
Dhanka kale Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa guddi u magacaabay baaritaanka dhacdadaasi. Guddigan ayaa loo igmaday in ay si dhow u soo baaraan weerarkaasi iyo weliba ciddii ka masuulka ahayd, si sharciga loo horkeeno.
Saraakiisha la dilay ayaa gelinkii dambe ee Arbacadii ka tagay Degmada Guriceel, ka hor inta aanu weerar jidgal ah ku qabsan wadada xiriirisa Degmooyinka Guriceel iyo Balanballe.
Saraakiishan oo toddobo ahayd ayaa shan ka mida la dilay, sida uu xaqiijiyay Axmed Shire Falagle, Wasiirka Warfaafinta Galmudug.
Previous articleRW Rooble oo gaaray Magaalada Garoowe (SAWIRRO)
Next articleJahwareer badan oo ka taagan heybta maleeshiyadii leysay Saraakiisha